About ICO: Iza no nanangona vola indrindra nandritra famantarana varotra - Blockchain News
About ICO: Iza no nanangona vola indrindra nandritra famantarana varotra
Tamin'ny taon-dasa, ICO no malaza indrindra fomba fitaizana bola. Fa manam-pahaizana milaza fa ho hitantsika ny fomba hafa tanteraka nitarika antoka varotra in 2018. Aoka ny hahatsiaro izay tetikasa nanangona vola indrindra nandritra ny ICO-indraindray, in vitsy segondra.
EOS – Mahery vaika indrindra ho an'ny décentralisées Fotodrafitrasa Applications
Mihoatra ny $700 tapitrisa nanangona. ICO dia mbola mitranga
EOS dia décentralisées sehatra ho an'ny mpandraharaha ny décentralisées fampiharana. Ny mpamorona ny EOS dia Dan Larimer. Ihany koa izy ho toy ny mpanorina fantatra ny BitShares, Steem, ary BitUSD.
Tsara homarihina fa ny mpandraharaha nanapa-kevitra ny fitondran-bola mandra-Jona 2, 2018. Izany dia be toy izany vanim-potoana ho an'ny tetikasa. Tamin'ny faran'ny volana Oktobra, amin'ny fandefasana Scale 2017 Brock fihaonambe Pearce nilaza fa ny ICO EOS efa nahasarika saika $700 tapitrisa in 345 andro, ary tsy ny fetra. Araka ny Pearce, ICO izany no hanangona mihoatra noho ny $1 lavitrisa eo anoloany vita.
Ny sehatra dia niasa tamin'ny blockchain amin'ny endrika 'ny fandidiana rafitra ho an'ny mpandraharaha. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny hanatsarana ny fahaiza-baovao teknolojian'ny (tsy misy fetra ny tonga lafatra, sy ny fahaiza-manao toy izany rafitra dia voafetra ihany fahatsiarovan-olombelona) ary hamahana ny olana ny blockchain scalability amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa an-tapitrisany sy ny hafainganam-pandehan'ny fifanakalozana ny an-tapitrisany isan-tsegondra amin'ny alalan'ny mirazotra kajikajy sy ny angona fanodinana. Ireo hevitra ireo dia miavaka. Ny fiasan'ny tambajotra dia ho raisina ho mpikambana amin'ny DPoS (Ampandraiketiny Famantarana ny Tsatòkan '). izany no, dia ilaina foana ny kitapom-batsy amin'ny vola madinika sasany ny fotoana rehetra ny raharaham-barotra mba hiseho eo blockchain. Ny tarehimarika mivaingana tsy azo omena izao ankehitriny izao, fa rehefa nandinika ny fitsipiky ny ampy harena ankibon'ny tany, dia lasa mazava fa arakaraka ny vola madinika no anananao, vintana vao mainka tsy maintsy hahita ny andian-tsoratra. Izany fomba tsara hita ao amin'ny tambajotra sosialy Steemit, izay eo ho eo ny fotoana mba hahazo antoka ny raharaham-barotra dia roa segondra.
FileCoin – Ny tsena ho an'ny Data décentralisées Storage
$257 tapitrisa nanangona
FileCoin dia décentralisées tambajotra amin'ny fotoany avy izy blockchain ho an'ny tahirin-kevitra fitehirizana sy fanodinana. Ny fitsipiky ny tambajotra asa dia azo ampitahaina amin'ny harena ankibon'ny tany; ny ihany no maha samy hafa ny sehatra harena ankibon'ny tany. Ireo mpampiasa dia manome fahafahana hahazo ny fitehirizana ho takalon'ny FileCoins.
Misy fomba roa ny mampiasa ny tambajotra:
Mpanjifa mividy rahona fitehirizana na mangataka ny ilaina ny mpitrandraka vaovao avy ao amin'ny harato sy handoavana ny asa amin'ny FileCoins.
Mpitrandraka manome mpampiasa amin'ny fidirana ny fitahirizana ny FileCoins.
FileCoin manana mpifaninana toy ny Storj sy Sia. Ny tetikasa voalohany dia mifototra amin'ny Ethereum ary manana olana amin'ny scalability, ary ny faharoa dia tena mora ihany koa. FileCoin ny mampiasa ny tambajotra sy ny protocols hifandray amin'ny mpampiasa sy ny tahirin-kevitra.
$232 tapitrisa nanangona
Tezos no vaovao tena nahavita fitongilànana blockchain rafitra izay mahatonga ny tena fiaraha-monina nomerika. Ny teknolojia manamora fanamarinana ofisialy, izay kajy dia manaporofo ny correct ny asa fehezan-dalàna sy fitsipika mampitombo ny fiarovana ny tena marefo ara-bola na zavatra mavesa-marani-tsaina fifanarahana.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny mpandraharaha hampahafantatra ny hafa ny Ethereum sy nanambara ny famoahana ny vaovao tamin'ny fifanarahana manokana niara-niasa tamin'ny fifanarahana marani-tsaina azo antoka. Ny rafitra dia mikendry ny fanatanterahana asa fototra, toy ny mangarahara, fiarovana, ary ny hafainganam-pandehan'ny asa. Ny teny ho marani-tsaina ny fifanarahana, antsoina hoe Michelson, manolotra rafitra fanamarinana ofisialy ambanin'ny foto-kevitra izay ampiasaina ao amin'ny orinasa mahakasika ny fiaramanidina.
Na dia teo aza izany fahombiazana ICO, ny tetikasa dia mbola ao am-boalohany ny ny fampandrosoana noho ny sasany ady anatiny. Ny mpanorina ny orinasa efa naka ny miady amin'ny filohan'ny Soisa tahirim-bola, izay nanome fanangonam-bola, sy ny mpampiasa vola dia mbola miandry ny famantarana. Raha tena manam-paharetana ny olona efa fitoriana fitoriana maro manohitra ny tetikasa.
Bancor – Décentralisées Liquidity Network
$150 tapitrisa nanangona
Bancor dia décentralisées tambajotra izay mamela anao mba hitahiry Ethereum famantarana sy mora niova fo azy ho eo an famantarana hafa tsy misy antoko fahatelo amin'ny vidiny iray avy hatrany kajy tsotra mampiasa tranonkala kitapom-batsy.
Ny fototry ny tetikasa dia marani-tsaina sy nohatsaraina fifanarahana nitranga fahiny ny Ethereum tambajotra izay famantarana fifanakalozana nandika cryptocurrency fifanakalozana. Ny fifadian-kanina, azo antoka, ary, inona no manan-danja indrindra, azo antoka. Varotra dia atao miaraka amin'ny fanampian'ny marani-tsaina fifanarahana. “Magic lainga amin'ny matematika sy torolalana tsotra izay nividy ka nivarotra ny fananany amin'ny fomba izay liquidity foana tany an-tsena dia foana na inona na inona ny boky sy ny fifanakalozana lisitra,” manazava ny mpandraharaha.
Ny zava-bita ny orinasa dia manoatra noho ny 50 famantarana tetikasa, anisan'izany Power masiaka natao tamintsika, savoka famantarana, DIKAN'NY HOE, ary ny hafa. Efa nanatevin-daharana izy ireo ny tambajotra Bancor. Tetikasa sivy mpiara-miombon'antoka efa ampiharina ny famantarana sy afaka hividy sy hivarotra azy any amin'ny Bancor fampiharana. Ankoatra BNT (Bancor Network famantarana), manohana ny fampiharana Ita, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, WISH, ary IQT. Noho ny fanampian'ny marani-tsaina fifanarahana, ny tambajotra niova fo 20.7 tapitrisa BNT ($58 tapitrisa eo ho eo amin'ny tahan'ny Bancor).
Status – Ny Ethereum Mobile OS
$100 tapitrisa nanangona
Izy io dia tanteraka amin'ny tontolo iainana vaovao décentralisées fampiharana (DApps), izay manome mpampiasa interface tsara amin'ny mety ho hiresaka amin'ny rafitra ary koa amin'ny hafa mpampiasa ny sehatra. Ary, ny rafitra tsy miankina dia afaka manatanteraka asa ny kitapom-batsy, ny navigateur, ary ny amin'ny chat. Ny dingana rehetra dia fitongilànana sy, noho izany, soa aman-tsara sy ny fifadian-kanina.
Mahaliana fa ny mpandraharaha dia Betting eo amin'ny fiaraha-monina eo amin'ny fampandrosoana ny tetikasa. izany no, ny mpandraharaha manome fahafahana ho an'ny tompon'ny famantarana eo amin'ny fiaraha-monina handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra ho an'ny tetikasa fampandrosoana na dia teo aza ny zava-misy fa ny toro lalana ICO dia midika ny tsy fisian'ny zo toy izany.
Fitongilànana fampiharana maro no efa voasoratra ara-panjakana ao amin'ny Status, anisan'izany Gnosis sy Aragon.
Gnosis (250,000 Ita nanangona) dia décentralisées sehatra ho an'ny filazana mialoha. Ohatra, mialoha dia azo natao ny olona mifanakalo hevitra momba ny olo-malaza, resaka fanaovan-gazety, mialoha lavanty tombany ny asa tanana, fanatanjahan-tena ireo hilokana, sns.
TenX – Niova fo ary mandany Virtual Currencies. amin'ny fotoana rehetra. na aiza na aiza
$83,1 tapitrisa nanangona
Ny fandoavam-bola Singapore orinasa miezaka mba hahatonga ny fampiasana ny cryptocurrencies ho mety sy mora tahaka ny fampiasana ny vola Fiat. Noho izany, dia nahazo ny fankatoavana avy amin'ny Visa sy ny MasterCard ary namoaka ny karatra plastika. Ny vola lany amin'ny namoaka ny karatra dia $15, nefa afaka hanafatra ny virtoaly dika ao amin'ny vohikala ofisialy ihany koa. Mampanantena ny orinasa asa iva saram amin'ny fampiasana ny fanompoana, raha ny fandaniana ny karatra dia latsaky ny $1,000 isan-taona. Raha toa ka lany eo amin'ny karatra mihoatra ambaratonga ity, ny asa nanirahana saram dia tsy ho nandidy.
amin'izao fotoana izao, ny rafitra miasa amin'ny bitcoin, raha Etera sy ny dash any mihidy beta maody. Ny fanohanana ny ERC20 Malagasy famantarana koa voalaza, izany hoe ny mifanentana amin'ny DGX, REP, TRUST, Neo, ary ny hafa. Inona no mahaliana indrindra dia hoe afaka mandoa amin'ny karatra TenX Na izany na tsy fivarotana izay manaiky Visa sy ny MasterCard. Izy io dia tena mampanantena tetikasa tohanan'ny Vitalik Buterin.
Civic – Secure Identity Tontolo Iainana
$33 tapitrisa nanangona
Civic mikendry ny hanorina tontolo iainana manerantany izay manome fahafahana hahazo ny ilaina momba fangatahana. Izany hoe, dia manome fahafahana mahazo fanamarinana maha-fotoam-pivavahana avy blockchain. Noho izany, Civic dia hanome tsotra sy azo antoka ny fidirana amin'ny mpampiasa manokana tahirin-kevitra sy manamarina ny maha-.
Ohatra, ny orinasa manome mponina ny Farany Atsinanan'i handray anjara amin'ny fiara antsapaka, izay hotontosaina ihany ho azy ireo. Raha ny mampiroborobo miara-miasa amin'ny Civic, dia afaka hahitana raha mpandray anjara rehetra, dia ny mponina ao 'ity faritry ny firenena.
Civic dia efa namoaka ny fangatahana ny famantarana nomerika sehatra, fantatra amin'ny anarana hoe ny Civic Secure Identity Sehatra (iOS Version ihany).
Aventus – B2B Ticketing Fotodrafitrasa
$18.7 tapitrisa nanangona
Aventus dia fitaovana mamorona sy hampiroborobo ny tapakila ho an'ny zava-mitranga isan-karazany ao amin'ny fomba azo antoka sy mangarahara. Ny mpikarakara ny hetsika-tena tsy mifehy ny fizarana tapakila.
Ny tetikasa dia mamela ny handinika indray ny fitsipiky ny fizarana tapakila amin'ny tsena faharoa ary koa ny hanafoana ny tsy ara-dalàna unregulated dokam-barotra sy ny asa mifandray amin'ny fivarotana ny tapakila. Toy izany fitaovana, ny mpikarakara dia ho afaka hametraka ny kely indrindra sy ny faratampony ny vidiny ho an'ny tapakila sy manara-maso ny hetsika ao amin'ny tsena faharoa, fanaovana ny dingana rehetra mangarahara sy ara-drariny.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia azo antoka ticketing rafitra. Ny asa voalohany indrindra Aventus dia ny hanova ny foto-kevitra ny fizarana tapakila ary ataovy décentralisées, izay mamela ny mpanohana sy ny rafitra manokana mba hivarotra tapakila ho an'ny zava-nitranga ho azy sy hahazo asa nanirahana azy io.
Ankehitriny isika dia handoa manokana ny saina ho maro Rosiana ICO tetikasa mahomby.
MobileGo – Ny Faharoa Gaming revolisiona Ho Avy
$53 tapitrisa nanangona
Ny fidirana aterineto haingam-pandeha no nanova izao tontolo izao ny lalao. Single fampielezan-kevitra no mankaleo, ary ny mpilalao te hifaninana amin'ny tsirairay ara-potoana. Ny teknolojia ny blockchain hanao ny revolisiona in Multiplayer lalao: ankehitriny cybersport fifaninanana dia ho hita ny rehetra. Izany no manan-tsaina efa misy amin'ny famantarana MobileGo, izay mamela ny mpilalao an-tapitrisany manerana izao tontolo izao mba hiray hina amin'ny fitongilànana P2P Fifaninanana sy lalao.
Mba nataony mahitsy, ny mpandraharaha te-hanitatra ny faritry ny e-fanatanjahan-tena, izay mamela ny mpilalao rehetra handray anjara amin'ny fifaninanana eo amin'ny mitovy iombonana. Players kosa ho voky ny zava-bita amin'ny vola sasany loka.
Rosiana harena ankibon'ny tany Center – Multicellular harena ankibon'ny tany
$43 tapitrisa nanangona
Rosiana mitana orinasa nandefa ny harena ankibon'ny tany foibe any Rosia, dia manangana manam-paharoa sy mandroso indrindra mpitrandraka, antsoina hoe Multiclet, ary mahatonga Sunrise mpitrandraka.
Ny tena fandrosoana hevitra amin'ity tetikasa ity dia ny hamorona ny "ASIC-mahatohitra" mpitrandraka izay aho ho ny cryptocurrency, ohatra, Ethereum, imbetsaka mahomby kokoa noho ny sary, ary mampiasa karatra kely dia kely ny habetsahan'ny angovo. Tondro toy izany dia nomanina mba ho tratra ny alalan 'ny fampandrosoana ny multicellular processeur, izay dia miorina amin'ny fitsipika toy izany koa ny nozaraina computing ny sary karatra Chip.
amin'izao fotoana izao, ny orinasa manome Sunrise ASICs amin'ny vahiny Bitfury poti. Ny fampandrosoana ny an-toerana dia haka computing processeur eo ho eo isan-taona. Ny tetikasa dia azo heverina ny revolisiona Rosiana amin'ny harena ankibon'ny tany.
ins Tontolo Iainana – The Grocery Industry, Reinvented
$42.1 tapitrisa nanangona
Ity startup no voalohany eran-Décentralisées tontolo iainana izay mampifandray mpamokatra sakafo sy ny mpanjifa mivantana.
Ny tanjona dia ny hoe afaka mifandray amin'ny mpividy ny mpanamboatra mivantana, nandika mpivarotra sy ny mpanelanelana izay tsy azo fehezina tanteraka. Matetika mpaninjara overuse ny tsena fahefana: overcharge izy ireo hanafoanana ny vidin-javatra sy ny mpivarotra madinika. Izy io dia mahazatra olana azo vahana amin'ny ins Tontolo Iainana.
SONM – Universal Zavona Supercomputer
$42 tapitrisa nanangona
Ny tetikasa dia maneho ny hevitra iray maneran-décentralisées supercomputer ny zavona computing. Décentralisées rafitra miasa eo amin'ny sehatra Ethereum no tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny asa sy ny fahaiza-manao computing. Io rafitra manokana dia tapa-rindrambaiko izay afaka mampiditra an'arivony na an-tapitrisany manerana izao tontolo izao solosaina iray ho solosaina Network. Izany dia ho azo tanterahina ny hoe hahazo vokatra namaky rakitsoratra-Na izany na tsy karazana computation sy ny pitsiny, na ny fikajiana ny isan'ny molekiola ao amin'ny tapa-ADN ny fitsaboana, na ny fikarohana toerana lavitra, na mitady vaovao karazana fiainana eto An-tany sy ny planeta hafa.
Ny tena vola nandritra famantarana varotra
A loharanom-baovao decenter.org
Aotrisy mikasa ny fandrindràna Bitcoin toy ny volamena sy ny Sampanteny
Ny Fitantanam-bola Aotrisy km ...
Previous Post:Ahoana no manova ny ICO Market in 2018?
Next Post:Blockchain News 8 Janoary 2018